महासंघको नेतृत्वमा सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने व्यक्ति वा समूह आउनुपर्छ: अध्यक्ष राणा - Pokhara News
होमपेज-अर्थ व्यापार-महासंघको नेतृत्वमा सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने व्यक्ति वा समूह आउनुपर्छ: अध्यक्ष राणा
महासंघको नेतृत्वमा सरकारसँग समन्वय गर्न सक्ने व्यक्ति वा समूह आउनुपर्छ: अध्यक्ष राणा
पोखरा न्यूज । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महाधिवेसन यहि मंसिर ११ देखि १३ गते सम्म काठमाडौंमा हुँदैछ । महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएको व्यक्ति स्वतः अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था भए अनुरुप हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा अध्यक्ष बन्दै हुनुहुन्छ । त्यस्तै आगामी कार्यकालको लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा निर्वाचन हुनेछ । जसमा हालका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र किसोर प्रधानको उम्मेदवारी परेको छ । दुवै उम्मेदवारले निर्वाचनका लागि तयारी गरिरहेको अवस्थामा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणा भने दुवैलाई मिलाएर लैजाने प्रयास भइरहेको बताउदै आउनुभएको छ । कोभिडबाट व्यवसायीक क्षेत्रमा असर परेको परिस्थितिमा सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडी बढ्न सक्ने व्यक्ति र समूह नै महासंघको नेतृत्वमा आउनुपर्नेमा समेत अध्यक्ष राणाले जोड दिनु भएको छ । यस्तै महासंघ भित्रको राजनीति र गुटलाई अन्त्य गर्ने गरी कम्तिमा पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदमा सहमतिको आधारमा उम्मेदवारी दिने कुरामा आफुले छलफल अगाडी बढाएको बताउनुभएको छ । महासंघको महाधिवेसन र चुनावको विषयमा केन्द्रीत रहेर अध्यक्ष राणासँग हाम्रा प्रतिनिधिले गरेको कुराकानी ।
# नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको रुपमा उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ । कस्तो रह्यो कार्यकाल ?
मेरो कार्यकाल कोभिडले गर्दा केही लम्बिएको पनि छ । मेरो कार्यकालमा थुप्रै नयाँ योजनाहरु नयाँ कार्यक्रमहरु ग¥यौं । महासंघलाई राष्ट्रिय तहमा र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बलियो बनाउन कार्यक्रमहरु गर्नको लागि थुप्रै किसिमका क्रियाकलापहरु भएका छन् । देश विदेशका भ्रमणहरु पनि यो पालि वर्ष मै दुई तीनपटक भएको छ । जस्तै प्रधानमन्त्रीसँग, राष्ट्रपतिसँग बाहिर गएर हामीले अन्तरक्रिया गर्ने मौका पायौं । भारत, चीन, युरोपमा गएर पनि नेपालमा व्यवसाय गर्नको लागि राम्रो वतावरण छ भनेर जानकारी गराउने मौका पनि पायौं ।
# तपाईले आफ्नो कार्यकालमा आत्मसन्तुष्टि हुने खालको कुनै काम भएको महसुस गर्नुभएको छ ?
मेरो कार्यकालमा जुन निरन्तर हुने कार्यहरु हुन्छन, नीतिगत रुपमा सुझावहरु दिने र व्यवसाय गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि पहल गर्ने किसिमको कुरामा अगाडि बढ्यौं । मेरो कार्यकालमा नेपाल प्रादेशिक रुपमा अर्थात संघियतामा गएकोले गर्दाखेरी हामीले सातवटै प्रदेशका सरकारसँगपनि समन्वय गर्नुपर्छ भनेर सातवटा प्रदेशको मुख्यमन्त्रीहरुसँग पनि हामीले सम्झौता ग¥यौं । उद्योग वाणिज्य महासंघको पनि सात वटै प्रदेशमा शाखाकार्यालय पनि खोल्यौं । महासंघको प्रदेश शाखा मार्फत त्यस क्षेत्रको आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि विभिन्न निकायहरुसँग समन्वय गर्ने कामहरु पनि अगाडी बढायौं ।
# महासंघले गर्नैपर्ने तर समय अनुकुल नमिलेर गर्न नसकिएका कामहरु केही बाँकी छन् ?
उद्योग वाणिज्य महासंघमा नेतृत्व लिएपछि कुनैपनि काम सिद्धिदैन । निरन्तर अगाडी बढ्ने कामहरु छन् । व्यवसायिक हक हितको लागि, व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनको लागि, स्वदेशी लगानीलाई कसरी विस्तार गर्ने, वैदेशिक लगानी कसरी भित्र्याउने भन्ने कुरा निरन्तर रुपमा हुने काम हो । अवको नेतृत्वले पनि त्यो गर्नुहुन्छ । अब नेपाल सरकारबाट लगानी सम्मेलनको पनि आयोजना भएको थियो जहाँ महासंघ पनि आवद्ध भएको थियो । नेपाल सरकारको यस्ता थुप्रै किसिमका कार्यक्रमहरु विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग जस्तै उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयसँग मिलेर सामाजिक सुरक्षाका कुराहरु यसैपटक अगाडी बढ्यो र नयाँ ढंगले सरकारले गरेको कार्यहरुमा महासंघले पनि हातेमाले गरेर अगाडी बढ्यो । सँगसँगै थुप्रै नीतिहरु जुन परिमार्जन गर्नुपर्ने थियो लगानीको वातावरण बनाउनको लागि त्यो कुरामा पनि हामीले नेपाल सरकारलाई थुप्रै सुझावहरु दियौं । अहिले अन्तिममा आउँदाखेरी कोभिडले गर्दा विश्वलाई नै सिथिल पारेको र नेपाल सानो अर्थतन्त्र भएकोले हामीमा थुप्रै चुनौतिहरु पनि छन् । बजेट ल्याउँदा हामीले सुझावहरु पनि दियौं । खासगरी मौद्रिक नीतिमा हामीले तीनवटा कुरा उठाएका थियौं । ब्याजदर घटाउनुपर्ने, पुनरतलिकिकरण गर्नुपर्ने, रिफाइनान्स गर्नुपर्ने कुराहरु भएको छ । तर अझ पर्याप्त छैन । अझ यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ र त्यसका लागि अव आउने नेतृत्वले पहल गर्नुहुन्छ । म पनि निवर्तमान अध्यक्षको हिसाबले पनि महासंघमा हुन्छु र सहयोग गर्छु । कोभिड–१९ को कारणले विश्वभरको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । अव अर्थतन्त्रको पुनरउत्थानका लागि निजी क्षेत्र र सरकारले गर्नुपर्ने
# कुराहरु के के देख्नुभएको छ ?
# यसमा अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर काम गर्न सकिदैन ?
अल्पकालका लागि हामीले मौद्रिक नीति मार्फत गयौं । त्यो पुग्दैन । किनभने अहिले पनि कोभिडको असर निरन्तर भइरहेको छ । अहिले बन्द खुलेको छ तरपनि जति सहज रुपमा उद्योगहरु चल्नुपर्ने हो नचलेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अल्पकालिन, मध्यमकालिन र दिर्घकालिन योजना बनाएर अगाडी बढ्नुपर्छ र लगानी विस्तार गर्नुपर्छ । ठूलो ठूलो आयोजनाहरु जुन जलविद्युत उर्जा क्षेत्रको कुरा अगाडि बढेको छ, राष्ट्रिय स्तरका ठूला आयोजनाहरु छन त्यसलाई छिट्टै सिध्याउने हिसाबमा नेपाल सरकार पनि जानुपर्ने हुन्छ । अहिले बजारमा पूँजीको कमी छ त्यसले गर्दा नेपाल सरकारबाट गर्नुपर्ने खर्चलाई पनि समयमा गर्न सक्यो भने बजारमा पूँजीको अभाव हुँदैन । सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको उधारो नै उठिरहेको छैन् । त्यसले गर्दा उद्योग व्यवसायलाई एकदमै अप्ठेरो परेको अवस्था छ । सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत गर्नुपर्ने पुनरकर्जाका कुराहरुमा सानामझौला व्यवसायलाई राम्रो नीति लिएर आएको छ तर कार्यान्वयन पक्षमा कताकता अझपनि राम्रोसँग हुन नसकेको अवस्था छ । अहिले गभर्नरले ल्याउनु भएको कुराहरुलाई हामीले स्वागत पनि गरेका छौं । त्यसलाई अझ दिर्घकालिन योजना बनाउनुपर्ने समय आएको छ । सरकारले बाहिरबाट लगानी भित्र्याउनुपर्ने कुराहरु, पूँजी पनि भित्र्याउनुप¥यो । त्यस्ता कुराहरुलाई ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ र निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने सहयोग त सरकारलाई गरिनै रहेको छ ।
# उद्योग वाणिज्य महासंघमा अध्यक्षको चुनाव नभई वरिष्ठ उपाध्यक्षको चुनाव हुने गर्छ । यो चुनावलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
# संस्थाको अभिभावकिय भूमिकामा हुनुहुन्छ । निर्वाचन आफैमा पनि प्रजातन्त्रिक प्रक्रिया हो । चुनावको समय छ । दुवै उम्मेद्वार आर्शिवाद लिन आउनुभएको होला । के आर्शिवाद दिनुभएको छ ?
निर्वाचन आफैमा प्रजातन्त्रिक प्रक्रिया हो र हुनुपनि पर्छ । किनभने प्रतिस्पर्धामा गएर अगाडि बढ्यो भने राम्रो पनि हुन्छ र कतिपय समयमा मेलमिलाप गरेर पनि अगाडी बढ्नुपर्छ । जस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघको इतिहासमा पनि थुप्रै अध्यक्षहरु हुनुहुन्छ जसलाई एकपछि अर्को गरेर मिलाएर लगेका छौं । उद्योग वाणिज्य महासंघमा पुग्दाखेरी हामीपनि आफ्नो समयलाई योगदान गरेर, आफ्नो हरेक आर्थिक गतिविधि र समाजिक काम छाडेर उद्योग वाणिज्य महासंघलाई सत प्रतिशत दिएको हुन्छौं । त्यही भनेर नै त्यहाँ नेतृत्वहरु आएका हुन्छन् । अहिलेपनि निर्वाचन प्रजातान्त्रिक ढंगबाट हुनुपर्छ भन्दाभन्दैपनि मिल्ने पक्षमा जानुपर्छ भन्ने कुरामा म पनि व्यक्तिगत रुपमा सोच्छु । किनभने अहिले कोभिडको बेला पनि छ । अहिले एक अर्कालाई निर्वाचन गरेर हिंडनु भन्दापनि मेलमिलाप गरेर अगाडी बढ्यो भने ठिक हुन्छ । दुईवटा पक्ष जुन हुनुहुन्छ एउटा वरिष्ठ उपाध्यक्षमा उठनु भएको किशोर प्रधान हुनुहुन्छ जो लामो समयदेखि महासंघमा बस्नुभएको छ । उहाँको पनि अनुभवहरु छ । उहाँ उद्योग वाणिज्य महासंघलाई चाहिने व्यक्ति पनि हो । अर्कोतर्फ चन्द्रप्रसाद ढकाल हुनुहुन्छ । उहाँपनि महासंघलाई चाहिने व्यक्ति हो । त्यसकारण दुवै जनालाई मिलाएर एकपछि अर्को गर्न सक्यो भने उहाँहरुको लागि पनि र महासंघको लागि पनि एकजनालाई गुमाउनु भनेको पनि महासंघले एउटा असल उद्यमी जसले उद्योग व्यवसायको लागि लडन सक्छ, उद्योग व्यवसायलाई अझ अगाडी बढाउन सक्छ र नेपाल सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न सक्छ । होइनभने महासंघलाई अगाडी बढाउने शक्ति गुमाउँछ । त्यसले गर्दाखेरी दुवै जनालाई मिलाएर सहमतिको वातावरण बनाएर अगाडी बढ्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ ।
# तपाई अध्यक्षको रुपमा के कस्तो पहल गर्नुहुन्छ ?
# दुवै उम्मेदवारको सवल पक्षहरु के के देख्नुभएको छ ?
दुवै जनाको पक्ष हेर्दाखेरी दुवैको आ–आफ्नो किसिमको सक्षमता छ । एकजना लामो समयसम्म उद्योग वाणिज्य महासंघमा बस्नुभएको र जिल्ला नगरमा दुईपटक उपाध्यक्षको पदमा कार्य गरिसक्नुभएको छ । उहाँको अनुभव र मेरो कार्यकालमा पनि दुईपटक उपाध्यक्ष भएर कार्यपनि गर्नुभयो । चन्द्रप्रसाद ढकालमा पनि आफ्नै किसिमको महत्व छ । उहाँलेपनि मेरो कार्यकालमा उपाध्यक्षको रुपमा एसोसिएट तर्फबाट रोजगारदाता परिषद्को सभापति भएर काम गर्नुभएको छ । त्यसकारण उहाँहरुको आफ्नै किसिमको क्षमता, आफ्नै किसिमको योज्ञता र आफ्नै किसिमको इमान्दारिता छ र दुवै जनाले महासंघको नेतृत्वमा पुगेर म गर्छु भनेर आफ्नो आफ्नो धारणाहरु लेखिसक्नु भएको छ । नेतृत्वमा पुगेपछि गर्ने भनेको महासंघको हकहितको लागि हो, व्यवसायीहरुको हक हितको लागि हो र सरकारसँग सहकार्य गरेर देश विकासको लागि आर्थिक विकासको लागि काम गर्ने हो । दुवै जनालाई सहमति गरेर अगाडि बढ्नको लागि मेरो प्रयास रहनेछ ।
# हामीले बुझ्दा दुवै उम्मेदवारले यहाँबाट बराबरी सुभेक्षा पाएका छन् ?
# आशावादी रहने ठाउँ कत्तिको छ ?
मलाई लाग्छ अन्तिम सम्मपनि किन हामी निराश हुने । आशावादी हुने ठाउँहरु अझपनि छन् । एकपटक बसेर कुरा गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा पनि तपाईमाथि केही प्रश्नहरु उठाइएका छन् । उम्मेदवारी घोषणा गर्दा तपाई एक उम्मेदवारको
# कार्यक्रममा गइदिनुभयो । नगइदिएको भए अझै राम्रो हुन्यो की ?
# एकातर्फ कोभिडले देशको आर्थिक क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको अवस्था छ भने अर्को तर्फ महासंघमा राजनीति हुँदा काम गर्न झनै गाह्रो भएको होला । के भन्नुहुन्छ ?
# नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रति जो आवद्ध भएर लाग्नु भएको छ उहाँहरुलाई साधारण सभाको विषयमा केही आव्हान गर्न चाहनुहुन्छ ?